Tsy misy intsony ny vola miditra amin'ny fizahan-tany sy ny solika: Afrika Avaratra eo an-tsisin'ny fianjerana
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Tsy misy intsony ny vola miditra amin'ny fizahan-tany sy ny solika: Afrika Avaratra eo an-tsisin'ny fianjerana
Raha ny tarehimarika ofisialy, mararin'ny virus COVID-4,065 no natontan'i Morocco ary 19 no matin'ny virus coronavirus; Tranga 161 3,382 tany Alzeria ary 425 ny maty; Tonizia 939 tranga ary 38 no maty; ary Libya 61 tranga ary maty roa.
Tara ny fahatongavany tany Afrika Avaratra ilay virus coronavirus vaovao fa nitombo haingana ny isan'ny tranga COVID-19.
Raha ny tarehimarika ofisialy, 4,065 161 ny mararin'i Morocco ary 3,382 no matin'ny virus coronavirus; Tranga 425 939 tany Alzeria ary 38 ny maty; Tonizia 61 tranga ary XNUMX no maty; ary Libya XNUMX tranga ary maty roa.
Hamid Goumrassa, mpandalina ary mpanao gazety ao amin'ny Algiers El Khabar gazety, nilaza tamin'ny The Media Line fa na eo aza ny tsy fitovian'ny fielezan'ny virus sy ny vokatr'ireo firenena atsy Afrika Avaratra, dia nitovy tamin'ny isan'ireo voany ihany i Algeria sy i Maroc. "Ankoatr'izay, ny firenena roa dia manana ny isan'ny maty betsaka indrindra tsy eo amin'ireo firenena afrikana avaratra ihany fa amin'ny kaontinanta afrikanina," hoy izy.
Nanazava i Goumrassa fa ny ankamaroan'ny aretina dia nifindra tamin'ny alzeriana tonga avy tany Eropa, indrindra ny Espana sy France, "izay nahavoa ny havany sy ny manodidina azy, izay nandray anjara mivantana tamin'ny fanaparitahana ilay virus."
Nasongadiny fa tsy toy ny Alzeriana sy Libya, izay ny harinkarenan'izy ireo dia saika miankina tanteraka amin'ny vola miditra amin'ny fanondranana solika sy gazy voajanahary, i Tunisia sy i Maraoka dia miankina amin'ny fizahan-tany ihany. Ireo sehatra roa ireo dia simban'ny areti-mandringana manerantany.
“Hatramin'ny 2014, Algeria dia niatrika krizy amin'ny tsy fahatomombanana ara-bola noho ny fihenan'ny vidin'ny solika. Ankehitriny rehefa nirodana ny vidiny, vao mainka sarotra ny raharaha », hoy izy.
Nilaza i Goumrassa fa miezaka manome toky ny olom-pirenena ny governemanta Alzeriana fa voafehy ny raharaha.
Saingy, hoy izy nanampy, "Ireo manam-pahaizana momba ny vola dia pessimistic na dia talohan'ny krizy virus corona aza. Heveriko fa tsy mahavita mampiakatra ny enta-mavesatra [hetra] amin'ny toekarena ny governemanta; misy deficit. Hiatrika krizy tena mbola tsy nisy toy izany i Algeria. ”
Ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana iraisam-pirenena dia efa naminavina fa hamindra ny COVID-19 any Afrika ny mpiasa sinoa saingy nanamafy izy ireo avy eo fa tonga tany Eropa ireo tranga voamarina. Vokatr'izany dia nampiato ny sidina ny ankamaroan'ny firenena afrikanina ary nanidy ny sisintaniny.
Any Libya, rotidrotiky ny ady an-trano, Ziad Dghem, mpikambana ao amin'ny House of Representatives monina any Tobruk (ilay antsoina hoe "governemanta Tobruk" izay nanambaran'ny tafika nasionaly Libya ny fahatokiana) ary mpanorina ny Hetsika Federaly any Libya, dia nilaza tamin'ny The Media Line fa ny toe-draharaha dia tsy tsara teo amin'ny sehatra politika, ary azo antoka fa tsy teo amin'ny sehatry ny filaminana, ny fiainana ary ny toekarena, "indrindra amin'ny krizy amin'ny vidin-tsolika izay misy akony lehibe amin'ny firenena toa an'i Libya, izay ny harena ara-toekarena ihany no solika."
Na izany aza, nanondro i Dghem fa ny vitsy an'isa sy ny tahirin-tsolika dia hanampy ny firenena hiatrika ny krizy.
"Amin'ny lafiny iray, ny manampahefana Libiana dia mifehy ny toe-javatra amin'ny fihanaky ny viriosy, satria na amin'ny vanim-potoana mahazatra aza ny firenena dia tsy foiben'ireo mpandeha na mpizahatany na ivom-barotra," hoy hatrany izy. "Ireo firenena izay nanana fifamoivoizana sy fivezivezena nitety tanàna ireo no voakasik'izany indrindra tamin'ny fiparitahan'ny COVID-19."
Donia Bin Othman, mpisolovava sady mpandinika ny politika, dia nilaza tamin'ny The Media Line fa efa tany am-ponja an-trano nandritra ny iray volana mahery ny Toniziana. Hatramin'ny nanombohan'ny krizy, ny governemanta dia nifantoka tamin'ny vahoaka izay iharan'ny virus ary nandray fanapahan-kevitra maika hanohana ireo andrimpanjakana ekonomika kely sy salantsalany.
"Mikasika ny fiomanana ara-toekarena, ny praiminisitra dia nanambara fanampiana ara-tsosialy ho an'ny fianakaviana 900,000 eo ho eo izay mitontaly eo amin'ny 50 tapitrisa dolara (145 tapitrisa Dinarisianina Tonizianina)," hoy ny fanazavan'i Bin Othman. “Ho fanampin'izany, vola mitentina 100 tapitrisa dolara (290 tapitrisa dinara) no natokana ho an'ireo andrimpanjakana sy olona tsy an'asa noho ny fiatraikan'ny krizy virus coronaavirus.”
Ankoatr'izay, nilaza izy fa ny fanjakana dia nanome toky fa hanome fonosana sakafo 60,000 amin'ny alàlan'ny Union Toniziana ho an'ny Fiarovana ara-tsosialy, halefa any an-trano eo anelanelan'ny 3 aprily sy ny faran'ny Ramadany.
“Misy ezaka lehibe vita, ary ny tena zava-dehibe dia ny fanaovana nomerika ny asa eo amin'ny ambaratongan'ny Ministeran'ny raharaha sosialy. Tsy misy isalasalana fa nisy zavatra tsara nivoaka tamin'ity krizy ity: noterena hiasa haingana amin'ny fanaovana nomerika isika, ary tsy maintsy tohizantsika aorian'ny krizy ary hamaritana azy amin'ny ambaratonga rehetra, "hoy i Bin Othman.
Nanampy izy fa ny fomba teknolojia manamora sy manamora ny fomba fanao ao amin'ny governemanta, manakaiky ny serivisy manakaiky ny olom-pirenena ary manampy amin'ny fampihenana ny kolikoly sy hahakivy ireo mpanao kolikoly "Arakaraka ny hampihenantsika ny isan'ny olona miditra an-tsehatra eo amin'ny sehatry ny fitantanan-draharaha no mampihena ny fahafaha-manao kolikoly," hoy i Bin Othman.
Ny krizy COVID-19 dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny fahasalamam-bahoaka sy ny sehatra ho an'ny daholobe amin'ny ankapobeny, ary ny maha-zava-dehibe ny fampiasam-bola bebe kokoa amin'ireo sehatra ireo sy amin'ny fanavaozana, hoy izy.
"Ity krizy ity dia tsy maintsy mitarika ny fisian'ny tontolo vaovao izay miahiahy bebe kokoa ny tontolo iainana sy ny planetantsika, ary koa ireo olona miasa mba hampivelatra ny angovo azo havaozina ary hamaritana ny fanjakana, ny fahefana ary ny fitondran-tena ao amin'ny fiarahamonina ary ny politika sosialy," Bin Othman nilaza.
Efa ambany ny vola miditra amin'ny fizahantany any Afrika Avaratra, manokana avy any Amerika Avaratra taorian'ny tranga fampihorohoroana tato ho ato.
The Birao fizahantany afrikanina dia miasa miaraka amin'ireo firenena afrikanina avaratra amin'ny programa Project Hope Travel
by DIMA ABUMARIA , Ny tsipika Media
Boeing Dreamlifter dia mampita saron-tava 1.5M
Ben'ny tanàna tsy faly amin'ny Governemanta milaza ny valin'ny krizy